Trafika avo lenta Taovan-kena 27 taonina sarona
Vorivorin-kena na tripy sy sokrila milanja 27 taonina no sarona tao amina teratany sinoa tetsy Ampefiloha Ambodirano, Antananarivo. Vokatry ny fiaraha-miasa avy amin’ny olona tsara sitrapo no nazahoana ny loharanom-baovao.
Nidina nanao ny fisavana ifotony teny an-toerana ny omaly alakamisy 05 septambra 2019 ny avy ao amin’ny sampana fikarohana heloka be vava eo anivon’ny zandarimariam-pirenena eo Fiadanana sy ny avy ao amin’ny Minisitera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (MAEP). Marihina fa misy ny didim-panjakana izay nivoaka tamin’ny volana janoary 2019 mandrara ny fanondranana omby sy izay rehetra mikasika izany. Manoloana ny fandikan-dalana toy izao dia nandray fepetra ny MAEP amin’ ny fanapotehana ireo entana tratra ireo. Aorinan’ny famotorana ity teratany sinoa ity dia ho entina eo anivon’ny ambaratongam-pahefana mahefa ny raharaha. Niova endrika izany ny trafika mahakasika ny omby, ka io tratra io ny fomba fanao vaovao, izay heverina fa mety efa mateti-piseho. Omby heverina fa efa an-jatony maro na an’arivony ihany koa no heverina fa nanangonana an’izany 27 taonina izany, ary mety bizina ihany koa izany fanangonana vorivorin-kena sy sokrila